Ungakwenza Kanjani Ukuhlaziywa Kombangi Kokubona Amathemba Wokwakha Izixhumanisi | Martech Zone
Uwathola kanjani amathemba amasha we-backlink? Abanye bakhetha ukusesha amawebhusayithi ngesihloko esifanayo. Abanye babheka izinkomba zebhizinisi namapulatifomu e-web 2.0. Futhi abanye bathenga nje ama-backlinks ngobuningi futhi bathemba okungcono.
Kepha kunendlela eyodwa yokuzibusa zonke futhi ucwaningo lomncintiswano. Amawebhusayithi axhumanisa abancintisana nabo kungenzeka ukuthi ahlobane ngokwezihloko. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka bavulekele ukubambisana kwe-backlink. Futhi izimbangi zakho seziwenzile wonke umsebenzi wokuzithola, ngakho-ke okumele ukwenze nje wukungena ngaphakathi uzithathele amathemba azo.
Kulesi siqondisi, uzofunda ukuthi ungabathola kanjani abancintisana nabo beqiniso, uthole ama-backlinks abo, bese uboleka labo abanamandla aphakeme kakhulu.
1. Thola izimbangi zakho zangempela
Into yokuqala okufanele uyenze ukuthola ukuthi obani abancintisana nabo bokusesha kweqiniso bese ukhetha okungcono kakhulu ongakuhlola. Khumbula ukuthi izimbangi zakho zosesho azifani nabancintisana nabo bangempela. Esikhundleni salokho, lawa mawebhusayithi abalwa phezulu kumakhasi wakho wemiphumela yenjini yokusesha (I-SERP), okusho ngamagama asemqoka ku-niche yakho. Lolu cwaningo lungakusiza nokuthi unqume isabelomali esilinganisiwe lekusasa lakho umkhankaso wokwakha izixhumanisi.
Indlela elula yokubona ukuthi obani izimbangi zakho eziyinhloko ukuthayipha amagama wakho okhiye wembewu ku-Google bese ubona ukuthi iziphi izizinda ezivela ku-Google SERP kaningi. Manje, uzothola amawebhusayithi angajwayelekile, afana ne-Men's Health noma i-Forbes noma amanye omagazini bokuphila abakleliswe ngamagama angukhiye we-niche, kepha, ngemuva kosesho oluncane, kufanele ube nombono omuhle wokuthi ngubani empeleni osebenza ku-niche yakho.
Vele, ukugoqa wonke amagama wakho okhiye wembewu nokubhala phansi amawebhusayithi abalwa kakhulu akusebenzi kakhulu. Ngenhlanhla, Ukuhlaziywa kokuncintisana kuyinselelo ejwayelekile yama-SEO nabanikazi bewebhusayithi, ngakho-ke kunamathuluzi amaningi obuchwepheshe angasheshisa inqubo. Uma usuvele usebenzisa ithuluzi le-SEO, noma ngabe iMoz, iSemrush, noma i-Ahrefs, kungenzeka ukuthi ube nohlobo oluthile locwaningo lomncintiswano olwakhelwe ngaphakathi. Ngokuya ngethuluzi le-SEO olisebenzisayo, uzokwazi ukubona izimbangi zakho zokusesha ngesihloko noma ngesizinda, noma kwesinye isikhathi zombili.
Ukukhomba izimbangi zakho ngesihloko, kuzofanele ufake amagama ambalwa okhiye wembewu futhi ithuluzi lizothola amawebhusayithi aphezulu abekwe lawa magama angukhiye kaningi. Le ndlela ikuvumela ukuthi ukhethe amagama angukhiye we-cherry bese ubheka izimbangi ku-niche encane.
Ukukhomba izimbangi ngesizinda, kuzofanele uthumele isizinda sakho. Ithuluzi beliyohlaziya wonke amagama angukhiye owabekayo futhi uthole amawebhusayithi anegama elingukhiye elikhulu kunawo wonke. Le ndlela ikuvumela ukuthi uthole amawebhusayithi ancintisanayo afana kakhulu newebhusayithi yakho, yize i-niche ingahle ibe banzi kunalokho obekuhlosile.
Lapho usuthole uhlu lwabancintisana, amathuluzi amaningi we-SEO azokuvumela ukuthi uwahlole usebenzisa amamethrikhi wekhwalithi anhlobonhlobo. Amamethrikhi ajwayelekile afaka igunya lesizinda, ithrafikhi ephilayo, namaphesenti wokuhlangana kwamagama asemqoka, okusho ukuthi ifana kanjani iwebhusayithi yomncintiswano neyakho. Sebenzisa lawa ma-metric ukukhetha abancintisana abasezingeni eliphakathi kwesihlanu neshumi ukwenza ucwaningo olwengeziwe lwe-backlink.
2. Thola i-Backlinks Yababangi Bakho
Lapho usuvele nohlu lwabancintisana bakho olufanele kakhulu, ungathutha uphenye amaphrofayli abo e-backlink.
Ukuhlola okusheshayo ama-backlinks ancintisana nawo, ungasebenzisa noma iyiphi ithuluzi lokuhlola i-backlink. Thayipha isizinda somncintiswano ukuze ubone amakhasi axhumene newebhusayithi, ama-URL abaxhumanisa nawo, imibhalo yehange, amabanga wesizinda, noma ngabe isixhumanisi siyalandelwa noma cha:
Uma ufuna ukwenza ucwaningo olunzulu ngama-backlinks wakho ancintisana nawo, kuzodingeka usebenzise isoftware ye-SEO yobuchwepheshe. Ithuluzi lokuzinikela lokuncintisana elizinikele lizokuvumela ukuthi ucwaninge izimbangi eziningi ngasikhathi sinye, kanye nokuhlunga okutholwe ama-backlinks ngesiphathimandla, indawo, amathegi angenalutho, ubungozi benhlawulo, neminye imingcele
Ngokusobala, enye yezinto ezinhle kakhulu zocwaningo lwe-backlink yilapho ungabona ukuthi yimaphi amawebhusayithi axhumanisa nabancintisana bakho ababili noma ngaphezulu. Lawa mawebhusayithi angamathemba akho abaluleke kakhulu e-backlink - maningi amathuba okuthi asebenze ngaphakathi kwe-niche yakho futhi mancane amathuba okuthi abe nobudlelwano obukhethekile nanoma yimuphi omunye wabaqhudelana bakho.
3. Khetha Amathemba aqine kakhulu we-Backlink
Lapho usudonse uhlu olugcwele lwama-backlinks encintisana nawo, ungahle ube nezinkulungwane, kwesinye isikhathi amashumi ezinkulungwane zamawebhusayithi angaba khona. Okucacile ukuthi kuningi kakhulu ukuqhuba umkhankaso wokufinyelela osebenzayo. Ngaphandle kwalokho, ukukopisha ngokungaboni onke amathemba we-backlink wabancintisana nabo akuyona isu elihle kakhulu, njengoba abanye babo banganikela ngama-backlinks asezingeni eliphansi azolimaza i-SEO yakho kuphela.
Ukunciphisa uhlu lwamathemba wakho we-backlink phansi ngosayizi ongalawuleka, udinga ukulahla amawebhusayithi ahlinzeka ngezixhumanisi ezisezingeni eliphansi. Izici ezivame kakhulu ukukhombisa ikhwalithi yamathemba we-backlink zifaka:
Igunya lesizinda. Ukuphakama kwayo, kungcono. Izizinda zeziphathimandla eziphakeme ngamawebhusayithi ngokwawo anama-backlink amaningi, okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu, kanye nokuhlangenwe nakho okuhle komsebenzisi, ngakho-ke kudlulisa amandla amaningi ngezixhumanisi zawo.
Dofollow / nofollow. Ngokungafani nezixhumanisi ezingenalutho, izixhumanisi ezingafakwanga ziyakwazi ukudlulisa ijusi yokuxhumanisa kumakhasi eziya kuwo. Izixhumanisi ezingenalutho azisebenzi ngokuphelele, kepha azinikeli kwizikhundla zakho. Kulungile ukuba nezixhumanisi ezingenalutho kuphrofayela yakho, kepha akufanele uchithe izinsizakusebenza zakho ukuthola okuningi kwazo.
Ukugqagqana kwesixhumanisi. Njengoba sekushiwo, izizinda ezixhumanisa nabancintisana bakho ababili noma ngaphezulu zibaluleke kakhulu njengamathemba we-backlink.
Ingozi yenhlawulo. Izixhumanisi eziqhamuka kumawebhusayithi anezithunzi anokuqukethwe okuncane noma okungenangqondo, amathani wezikhangiso, kanye nokuhlangenwe nakho okubi komsebenzisi kungakufaka emanzini ashisayo ngeGoogle.
Ngokuya ngethuluzi le-SEO olisebenzisile ukuqoqa amathemba we-backlink, uzokwazi ukusebenzisa amanye noma wonke lawa ma-parameter angenhla ukuhlunga uhlu lwama-backlinks. Ukuthatha iMoz njengesibonelo, uzoba nayo DA ekuphathweni kwesizinda, Isikolo Sogaxekile, Futhi Amasayithi ahlangana:
Amanye amathuluzi we-SEO angaba namamethrikhi ahlukile noma amagama ahlukile kumamethrikhi afanayo, kepha inqubo iyafana ngokuyisisekelo. Kufanele unqume ukuthi yini imibundu yakho (isb. Igunya lewebhusayithi> 60; ubungozi benhlawulo> 50) bese uhlunga amathemba akho ngokufanele. Shintsha izilungiselelo zakho uze ushiywe nenombolo eyanelisayo yamathemba futhi lolu uhlu lwakho olufushane.
4. Qala Imikhankaso Yokufinyelela
Manje njengoba unohlu olufushane lwamathemba aphezulu, sekuyisikhathi sokubona ukuthi ngubani kubo ongazimisela ukusingatha ama-backlinks akho.
Isinyathelo sokuqala emkhankasweni wokufinyelela kwakho ukwahlukanisa amathemba akho ngezigaba ezihlukile bese ukhetha indlela efanele yokwakha ukuxhumana nesigaba ngasinye. Vula amakhasi owakhethele uhlu lwakho olufushane, bese ubheka ukuthi ama-backlink abekwe kuphi ngqo ekhasini. Hlukanisa amathemba ngokwesimo se-backlink.
Nazi izibonelo zalokho okuqukethwe kwe-backlink kungabukeka kanjani:
izigaba zabalingani bebhizinisi;
Uma usebenzisa isoftware enikezelwe yokufinyelela, uzokwazi ukumaka amathemba akho khona lapho. Uma kungenjalo, kopisha izizinda ezenzelwe i-backlink kusipredishithi se-Excel, bese umaka izigaba kukholamu elandelayo:
Ngemuva kwalokho ungahlela amathuba akho ngezigaba, uthole imininingwane yokuxhumana, bese uqala ukufinyelela kwakho. Khetha i- isifanekiso se-imeyili ngokuya ngohlobo lwethemba, bese usho ngokuqondile ukuthi uzocelani, nokuthi yini ongayiphindisela.
Khumbula ukwenza umyalezo wakho wokufinyelela ube owomuntu uqobo. Abantu abazithandi izinhlamvu ezinjenge-bot, futhi imvamisa bazisuse ngaphandle kokufunda.
Note: Ukuphenya ngamathemba akho kukunikeza elinye ithuba lokuhlola amawebhusayithi abo ukuthi ayasebenziseka yini futhi asezingeni futhi ususe amanye amathemba ohlwini. Futhi, uma uthola ukuthi amanye amawebhusayithi ayizinkomba zebhizinisi, amawebhusayithi e-web 2.0, noma ezinye izindawo lapho ukhululekile khona ukudala okuqukethwe, asikho isidingo sokufinyelela kuzo. Bahambisele kuhlu oluhlukile bese ubeka ama-backlinks akho kunoma iyiphi ifomethi edingekayo.
5. Bheka i-Backlink Profile yakho
Ukuqapha umlando wakho we-backlink kuzokuvumela ukuthi ubone ukuthi ama-backlink amasha enze ushintsho yini ezikhundleni zakho zezikhundla, qaphela uma kukhona okungahambi kahle, futhi uphenye noma yiziphi izinkinga ezivelayo.
Ukuqubuka okungazelelwe kwama-backlinks asezingeni eliphansi kungenye yezinto engadinga ukuthi uyinake. Kungaba yi ukuhlaselwa okungalungile kwe-SEO ngomunye wabancintisana nabo, noma izixhumanisi zingavela ngokomzimba, noma kungenzeka inkampani yakho ye-SEO ithenge izixhumanisi ezisezingeni eliphansi zewebhusayithi yakho. Kepha noma ngabe siyini isizathu, ukunyuka okungazelelwe kwezixhumanisi ze-spammy kungaheha ukunakwa yiGoogle futhi kukuzuzele inhlawulo. Futhi ukululama kuleso sijeziso kungathatha kusuka ezinyangeni ezimbalwa kuye, hhayi, neze.
Uma ubona ukukhula okusolisayo kwenani lama-backlinks kuwebhusayithi yakho, qiniseka ukuthi uphenya ukuthi ngabe lezi zixhumanisi zilungile noma zimbi nokuthi zivelaphi. Uma izixhumanisi zimbi, zama ukuxhumana nabanikazi bewebhusayithi ubacele ukuthi basuse noma okungenani balandele izixhumanisi. Uma kungenakwenziwa, ungasebenzisa Ithuluzi le-disvow le-Google ukutshela iGoogle ukuthi awuhlangene ngalutho nazo.
Ukwehla okungazelelwe kuma-backlinks asezingeni eliphakeme kungenye into engadinga ukunakwa kwakho. Lokhu kungenzeka ngoba ikhasi lokuxhumanisa lithuthele kwenye i-URL, lisusiwe, okuqukethwe yikhasi bekuguqukile, noma i-backlink uqobo isusiwe noma yathathelwa indawo isixhumanisi esincintisana nawe. Kulokhu, udinga ukuxhumana nomlingani we-backlink ukubona ukuthi kwenzekeni futhi ubuyisele i-backlink uma kungenzeka.
Ungakhohlwa ukuqapha amaphrofayili wakho we-backlink esincintisana nabo, futhi. Naka ukukhuphuka okungazelelwe kwakamuva kwenani le-backlink. Uma kukhona, hlola ukuthi zivelaphi. Uma leli themba elisha libonakala lithembekile, cabanga ukulifaka nasekufinyeleleni kwakho, futhi.
Ukuhlaziywa kokuncintisana kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokuthola amathuba ekhwalithi ye-backlink. Ayikho enye indlela engaletha leli banga lokufaneleka. Futhi ukuhola kuyashisa futhi, ngoba izimbangi zakho sezivele zikwazile ukubeka ama-backlinks azo lapho. nakanjani indawo yokuqala ukwakha ama-backlinks akho noma okuthile ongakuzama uma ungakaze uzame ngaphambili.
Tags: ukuhlaziywa kwe-backlinkUkuhlaziywa komncintiswano we-backlinkukufinyelela kwe-backlinkukubambisana kwe-backlinkukuxhuma emuvaUkuhlaziywa komncintiswanoukwakha isixhumanisiumkhankaso wokwakha izixhumanisiukufinyelela ekwakheni isixhumanisiexhumanisaukusesha okuphilayoukusebenzisa ngokugcwele injiniukuhlaziywa kwe-seoseo Poweruite